ခင်မင်းဇော်: ဘ၀ဒိုင်ယာရီ အမှတ် နှစ် အခန်း(၃)
Posted by ခင်မင်းဇော် at 2:45 PM
အင်း .. အမရဲ့ ဘ၀ဒိုင်ယာရီ တိုင်းမှာ အကောင်းဘက်ကို တွေးတတ်တဲ့ စိတ် နဲ့ ကျရာကို ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့ သတ္တိတွေ အထင်းသား ပေါ်လွင်နေတယ် ။
တရားသူကြီး အမိန့်ချတဲ့ နေရာလေးကို အကြိုက်ဆုံးဘဲ။ စင်္ကာပူက အတိုက်အခံတွေကို တရားစီရင်တာကျနေတာဘဲ…ခွိ..ခွိ
ဗမာပြည်မှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်သား လုံးဝ လုံးဝ မရှိဘူးတဲ့ နော် အမ.. ဘာမှတ်လို့တုံး. ဟုံးဟုံး.။ တရားသူကြီးတွေ ခမျာလဲ အသင့်ရေးပီးစီရင်ချက်လေး ဖတ်ပြဖို့အရေး အလုပ်ရှုပ်ခံပီး အမှုကလဲ ခနခနခေါ်စစ်ရသေး..။ ဂျစ်တီးဂျစ်ကန်နဲ့ အရာရာက ထီမထင်ရင်ဆိုင်ခဲ့ပုံလေးကတော့ သဘောကျတယ်။
အခန်း ၄ ကိုစောင့်နေပါတယ်အမ မဂျစ်တူးပြောသလိုပဲ ဘ၀ဒိုင်ယာ၇ီ နှစ်ခုလုံး အကောင်းဘက်ကိုတွေးထာတာ ကို ချီးကျူးပါတယ်အမ။
ဘဝ ဒိုင်ယာရီကို လာဖတ်သွားပါတယ် အစ်မ။
я так считаю: шикарно!! а82ч